द्विपक्षीय व्यापारको विषयमा उपलब्धिविहीन - Karobar National Economic Daily
द्विपक्षीय व्यापारको विषयमा उपलब्धिविहीन
query_builderAugust 28, 2017 8:02 AM supervisor_account visibility533
आर.बी. रौनियार प्रबन्ध निर्देशक इन्टरस्टेट मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट प्राइभेट लिमिटेड
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पाँचदिने भारत भ्रमणमा निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट एक दर्जनभन्दा बढी व्यवसायी पनि सहभागी भएका थिए ।
महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाद्वारा नेतृत्व गरिएको निजी क्षेत्रको टोलीमा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा, उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू अन्जन श्रेष्ठ, ज्योत्सना श्रेष्ठ, ओमबहादुर राजभण्डारी, सौरभ ज्योति, भरतराज आचार्य, शाहिल अग्रवाल, हेमराज ढकाल, शिवप्रसाद घिमिरे, वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक वैद तथा इन्टरस्टेट मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक आर.बी. रौनियार रहेका थिए ।
देउवाको दिल्ली भ्रमणले निजी क्षेत्रका जायज समस्या कतिको सम्बोधन गर्याे भन्नेबारे रौनियारसँग कारोबारका सम्पादक कुबेर चालिसेले गरेको कुराकानीको सार :
यसपालि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको मुख्य उपलब्धि के भयो ?
मेरो विचारमा कनेक्टिभिटीका केही कुराबाहेक केही पनि भएन । व्यापारको विषयमा केही उपलब्धि देखिएन । कनेक्टिभिटी भनेर एउटा कुरा त गरियो, तर त्यसमा पनि पूर्वाधारको कुरा मात्र आयो । दुई देशबीचको व्यापारका लागि जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यसमा केही भएन । पूर्वाधार विकासको कुरा उठे पनि व्यापारको विषयमा केही देखिएन ।
भ्रमणबाट नेपाली व्यवसायीको के आशा थियो ?
सेवा निर्यातलाई अहिलेसम्म भारतले मान्यता नदिएकाले केही हुन्छ कि भनेको तर त्यस विषयमा छलफल नै भएन । बोर्डर कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार विकासको कुरा त आयो, तर जीएसटी लागू भएपछि त्यसले हाम्रो व्यापारमा पारेका समस्या समाधानको अपेक्षा गरिएको थियो, त्यस विषयमा छलफल नै भएन ।
छिमेकी मुलुक भारतसँग जुन रूपमा हाम्रो व्यापार हुन्छ, त्यसमा पनि भारतीय रुपैयाँ तिरेर नेपाल आयात गर्दा नेपालीलाई लाग्ने करको विषयमा छलफल हुन्छ कि भनेको, तर त्यस विषयमा पनि कुरै उठेन । साथै, भारतमा नेपाली उत्पादनले निर्यातका लागि प्राथमिकता पाएको छैन । त्यस विषयमा पनि कुरा उठेन ।
तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दा पारवहन सन्धिमा स्पष्टसाथ भनिएको छ, कुनै किसिमको सरकारी कर लागू हुँदैन । हामीहरू रोड ट्रान्सपोर्ट गर्छौं, त्यसमा भारतले जीएसटी ५ प्रतिशत कर लगाएको छ ।
त्यसैगरी रेल सेवामा १२ प्रतिशत जीएसटी कर लागू गरिएको छ । हामी निर्यातबापत जुन खर्च गर्छाैं, तर त्यसले भारतमा सामान निर्यातमा मान्यता पाएन । तेस्रो मुलुक पेमेन्टले गर्दा १८ प्रतिशत जीएसटी रहेको छ ।
यसले उपभोक्ता मूल्यमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । स्वदेशी उत्पादनले निर्यात गर्दा भोगिरहेको समस्या कहिल्यै समाधान भएन । डिटेन्सन र डेमरेज फीको कुरा गरौं भने त्यो कहिल्यै समाधान नभएको समस्या हो र यसको समाधान होला भन्ने लाग्दैन । नेपालको सामान निर्यात गर्दा तथा आयात गर्दा नेपाली व्यवसायीको कुनै पनि गल्तीका बाबजुद नेपाली व्यवसायीले डेमरेज फी तिर्नुपरेको छ । त्यसले गर्दा व्यापारमा असर परिरहेको छ ।
उदाहरणका लागि मेरो आफ्नो कारोबार हिसाबको कुरा गर्ने हो भने ड्राइपोर्टसँग र रेल्वे सेवासँग सम्बन्धित भएकाले मलाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारले फोन गरेर इन्टरमोडल डिपार्टमेन्टलाई एजेन्डा पठाउनुप¥यो भनिएको थियो ।
तेस्रो मुलुक कार्गाेको कुरा गर्ने हो भने ट्रान्जिट कार्गाेको रेल सञ्चालन मनोपोली अर्थात् सिंगल रहेको छ । प्रतिस्पर्धी नभई मूल्य कहिल्यै झर्दैन । त्यसैले मोनोपोली बे्रक गर्ने एजेन्डा राखौं भनेको थिएँ । त्यसलाई कसरी गर्ने भने भारतमा प्राइभेट अपरेटरको लाइसेन्स दिइरहेको छ । निजी अपरेटरलाई आउन दिऊँ । इन्डियन रेल्वेले पनि आफ्नो काम गरिरहेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई किन सहभागी हुन नदिने भन्ने कुरा राखेको थिएँ । भारतीय रेल्वेकै रेल हो तर अपरेटर अर्को हुनासाथ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यस्तै, अर्काे कुरा के थपेको थिएँ भने त्यसमा नेपालीको पनि स्वामित्व हुन सक्छ र नेपाली निजी क्षेत्रले पनि लगानी गर्न सक्छ ।
हिजोआज खुला बजार भनिए पनि भारत र नेपालमा चलाउने रेल्वेमा मनोपोली रहेको छ । रेल त भारतीय रेल्वेकै ट्र्याकमा चल्छ तर त्यसलाई निजी क्षेत्रले लिन सक्छ र प्रतिस्पर्धी सेवा दिन सक्छ भन्ने हो । तर, त्यसको पनि कुनै कुरा भएन । एजेन्डा मागियो तर काम भएन ।
नेपाल भारतबीचको रेलसेवा सम्झौताको पुनरावलोकनको पनि त कुरा थियो नि, त्यो के भयो ?
सन् २००४ मा हामीले रेलसेवा सम्झौता ग¥यांै । अब १३/१४ वर्ष भयो, त्यसलाई पुनरावलोकन गरिनुपर्छ भनिरहेकै हो । यसअघिकै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नै पनि अहिलेको अवस्थामा रेल्वे सम्झौतालाई पुनरावलोकन गरिनुपर्छ भन्ने विचारको एकरूपता देखिएको छ, तर कहिले र कतिभित्र गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छैन । त्यसका लागि डेडलाइन नराखिएकाले पनि समयमा हुन सकेको छैन ।
यस्तै, व्यापार सन्धिको विषयमा पनि कुरा उठाइएको छ । व्यापार सन्धि २०१६ मा नवीकरण भयो । नवीकरण हुँदा त्यसमा हाम्रा केही विषय रहेका थिए । त्यसलाई टेकअप गर भनेर चारवटा चेम्बरले मिलेर एउटा एजेन्डा बनाएर हामीले सरकारलाई दिएका थियौं ।
त्योभन्दा पहिले आईजीसीको मिटिङ हुँदा पनि दिइएको थियो । तर, ट्रेड ट्रिटीमा छलफल भयो न आईजीसीको विषयमा छलफल भयो । त्यसमा म के देख्छु भने हाम्रो सम्झौता गर्ने टिम नै धेरै कमजोर छ । यसले गर्दा केही उपलब्धि हुँदैन । यस्ता समस्या कसैले टेकअप नगर्ने हुन सक्छ ।
कर्मचारीतन्त्र मात्रै समस्या हो कि बाहिर चर्का राष्ट्रवादी कुरा गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले पनि भारतसँग कुरा राख्न नसकेको हो ?
यसमा अर्को समस्या पनि के हो भने नेपालमा छिटो–छिटो सचिवहरू परिवर्तन हुने र कर्मचारीतन्त्रमा आएको परिवर्तनसँगै राजनीतिक आधारमा परिवर्तनले गर्दा पनि यस्ता समस्या देखिने गरेको छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कडा नहुँदा यस्ता समस्या आउने गरेको हो ।
भारतको कुरा गर्ने हो भने अहिले कर्मचारीतन्त्रले नै हो राज्य चलाउने, मन्त्रीहरूले राज्य चलाउने होइन । भारतमा कर्मचारीतन्त्रले नै यति धेरै घुमाउने गर्छ । उहीहरूले चाहेभन्दा अरू चिज दायाँ–बायाँ हुँदैन । त्यही केसमा हामी फस्नैपर्छ । तर, नेपाल–भारतको बीचमा राजनीतिक रूपमा एउटा कुरा हुन्छ र रियलमा अर्काे हुन जान्छ ।
जे विषयमा पनि द्विदेशीय सम्झौता गर्दा पनि अलि जानेको मान्छेलाई सहभागी गराउँदा त्यसको रिजल्ट राम्रो आउन सक्छ । होइन भने यही ताल हो भने त त्यसमा खासै उपलब्धिमूलक हुन सक्दैन ।
तर, सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले भारतसँग व्यापारघाटा बढ्यो, भारतले सहयोग गर्नुप¥यो भनेको सुनियो । वास्तवमा भारतले नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न के गर्न सक्छ र ?
भारत भ्रमणबाट सरकारले व्यापारघाटा कम गर्न केही गरेको देखिँदैन । भन्नलाई त हामी व्यापारघाटाको कुरा गर्छौं, तर व्यापारघाटा कम गर्ने तरिका हामीले के प्रस्ताव ग-यौं त ? अरूको भर परेर त भएन, आफूले पनि केही प्रस्ताव ल्याउनुप-यो नि !
यसो गर्दा व्यापारघाटा घट्छ है भनेर त्यसको बाटो आफूले निकाल्नुप-यो । अहिले मात्र होइन, पहिल्यैदेखि सबै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा खालि एउटा विषय मात्र उठाइने तर त्यसको कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा सिंगल एजेन्डा भए पनि कनेक्टिभिटीलाई जोड दिइएको थियो ।
भारतको एउटा बानी के छ भनेर जुनसुकै प्रधानमन्त्री जाँदा यो लिएर जाऊ है भनेर दिने परम्परा छ । जुनसुकै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला भारतले यो गर्छु भन्ने तर पछि गएर नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । वीरगन्जमा एकीकृत भन्सार चौकी (आईसीपी) तयार भइसक्यो, तर हस्तान्तरण कहिले गर्ने भनेर प्रश्न सोध्दा त्यसको जवाफ नै आएन ।
भारतीयतर्फ त्यसको निर्माण गरी उद्घाटन भइसके पनि सञ्चालनमा आएको छैन । किन चलेन भन्दाखेरि नेपालका तर्फबाट क्रस गर्ने ठाउँ हुन नसक्दा चल्न सकेन । गत वर्षको बजेटमा आईसीपी यो आर्थिक वर्षदेखि चालू गर्ने भनिएको थियो । खोइ त त्यसका लागि तयारी के गरियो ?
छलफलमा दिइएको स्टेटमेन्टमा डिसेम्बरको अन्त्यसम्म चल्ने भनिएको छ । किन सञ्चालन र हस्तान्तरण गर्न सकिएको छैन । भारतले जबसम्म आईसीपी हस्तान्तरण गर्दैन, तबसम्म नेपालले आन्तरिक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्दैन । नेपाल कार्यान्वयन पक्षमा अत्यन्त कमजोर छ ।
भारतले नेपाल–भारत सीमामा चारवटा एकीकृत भन्सार चौकी (आईसीपी) २०१२ मै बनाइसक्ने भनेको हैन र ?
नेपाल–भारत सम्झौताअनुसार २०१२ मा आईसीपी सञ्चालनमा आउनुपर्ने हो, तर पाँच वर्ष ढिला भइसक्दा पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । त्यसमा भारत सरकारको ग्रान्ट भएकाले सिभिल कन्ट्याक्टर पनि भारतीय नै छ ।
पहिलेको ठेकेदारले छोडेर गयो र फेरि अर्काे टेन्डर गर्दा ढिलाइ भएको हो । सरकारी प्रक्रिया झन्झटिलो हुने गर्दा काम द्रुत रूपमा अगाडि बढ्न ढिलाइ भयो । जग्गाको मुआब्जा दिने कामले दुई वर्ष खाइदियो । यी विविध कारणले गर्दा आईसीपी अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।
भारतले वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगन्ज आईसीपी गर्ने भन्यो तर वीरगन्जबाहेक अन्य ठाउँमा काम नै सुरु हुन सकेको छैन । अन्य तीन ठाउँमा कहिलेसम्म सञ्चालनमा आउने सपनामै रहेको छ । सन् २००४ गरेकोमा काम २०१७ मा आएर एउटा पनि सञ्चालन गर्न सकिएको छैन भने अन्य कहिले सुरु हुने कहिले सञ्चालनमा आउने ।
भनेपछि त नेपाल–भारत सम्झौता भएर पनि बन्न नसकेका आयोजना त धेरै देखियो । किन यसो भएको होला ?
नेपाल र भारतबीचमा काम गर्नका लागि राजनीति नै हावी भएको देखिन्छ । हाम्रा नेताहरूले भारतविरोधी भइयो भने राष्ट्रियता देखिन्छ भन्ने सोचका छन् । राजनीतिक विषय आफ्ना ठाउँमा छ भने व्यावसायिक विषयले दुई देशबीचमा नजिकपना ल्याउने गर्छ ।
भारत र चीनबीच व्यापार छ भने नेपाल–भारत तथा नेपाल–चीनबीच पनि व्यापार नहुने भन्ने होइन, तर हाम्रा नेतामा चीनको नजिक भए राष्ट्रवादी, भारतनजिक भए राष्ट्रघाती भन्ने मान्यता छ । जसका कारणले नेपालले धेरै कुरा गुमाउनुपरेको छ ।
एउटा उदाहरण दिन्छु, जुन बेला भारत र नेपालबीचमा व्यापार सन्धि भयो त्यस बेला नेपालको सामान भारत जाने बाटो खुल्यो र त्यसको नतिजा पनि राम्रो आयो । त्यसबेला भारतमा वनस्पति घिउ बनाउने कच्चापदार्थको भन्सार उच्च थियो र नेपालमा जम्मा ५ प्रतिशत थियो ।
त्यति बेला नेपालमा वनस्पति उद्योग यति धेरै फस्टायो कि त्यो सबै भारत गयो र त्यसको नतिजा के भयो भने भारतले पछि आएर कोटा प्रणाली लागू गरिदियो अनि नेपालको वनस्पति उद्योग नै बन्द भयो ।
तर नेपाली निजी क्षेत्रसँगको भेटमा भारतकी वाणिज्यमन्त्री निर्मला सीतारमणले त भारतले केही रोकेको छैन, नेपालले जति सके पनि निर्यात गरे हुन्छ भन्नुभयो नि त ?
होइन, कोटा अझै छ र त्यो कागजमै छ । त्यसैले उहाँले नेपालप्रति सद्भाव देखाए पनि भारतीय कर्मचारीतन्त्रले त कागजमा लेखिएकोे मात्र बुझ्छ । अहिले पनि कोटा भएकाले वनस्पति घिउ अहिले पनि गैरकानुनी तवरबाट व्यापार भइरहेको छ । कोटाले सीमाक्षेत्रमा गैरकानुनी व्यापारमात्र फस्टाउने हो ।
जीएसटीका कारण नेपालमा गैरकानुनी व्यापार बढ्छ भनिन्छ नि ?
हो, जीएसटीका कारण पनि गैरकानुनी व्यापार बढ्छ । गत साता भन्सार कार्यालयले सूचना निकालेर आयातको मूल्यांकन जुन हुन्छ, त्यसमा जीएसटी जोडेर मात्र राजस्व लगाउने भनेको छ । यसको अर्थ कानुनी रूपमा आयात गर्दा सामानको भाउ बढ्ने भयो ।
हैन भने गैरकानुनी व्यापारले प्रश्रय पाउने भयो । भारतीय रुपैयाँबाट किन्यो भने हामीले जीएसटी शुल्क तिरेर आउनुप-यो । भन्सारले मूल्यांकन गर्दा सामानको मूल्यसँगै जीएसटी जोडेर भन्सार लिने गर्छ । करका नाममा भन्सार र जीएसटी शुल्क प-यो ।
जीएसटी शुल्क पनि १८ र २८ प्रतिशत रहेको छ । यसले गर्दा कि त उपभोक्ता मारमा परे, कि त बोर्डरमा गैरकानुनी व्यापारलाई प्रश्रय दिइयो । डलर पेमेन्टमा आउने त धेरैजसो कच्चापदार्थ मात्र हो ।
भारतले कानुनी अड्चन देखायो, तिहारपछि खाना पकाउने ग्यासमा नाकाबन्दी
अध्यक्ष, एलपी ग्यास उद्योग संघ
भारत सरकारले नेपाली नम्बरको बुलेट सञ्चालनको विषय आफ्नो देशको कानुनले नदिने भन्दै कुरा गर्न नचाहेको गुनासो नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणमा यो विषय उठान गर्ने भनिए पनि यसमा छलफल भएन, तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा र महासंघका कार्यकारी सदस्य तथा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष घिमिरेले भारतीय सरकारका वाणिज्य राज्यमन्त्री निर्मला सीतारमणसँग भेटघाट गरेर आफ्ना समस्या अवगत गराए ।:
यस भेटघाटमा पनि मन्त्रीले यसबारे जानकारी रहेको भन्नेबाहेक कुनै प्रतिक्रिया दिइनन् । यसै विषयमा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले कारोबारसँग गरेको कुराकानीको सार ः
भारतीय पक्षको उदासीनताका कारण नेपाली नम्बरप्लेटका बुलेट सञ्चालन गर्ने काम अनिश्चित बनेको छ । संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले अघिल्लो साता नेपाली नम्बरप्लेटको बुलेट एक महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो, जसबाट संघ धेरै आशावादी थियो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यस पटकको भ्रमणमा यस विषयमा छलफल हुने जानकारी हामीलाई दिइएको थियो । हामी पूर्ण आशावादी भएर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण टोलीमा गएका थियौं । समितिको बैठकमा परराष्ट्र र आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवले पनि प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका बेला बुलेटसम्बन्धी समस्या प्राथमिकतामा राखेर निकास खोज्ने बताएका थिए । तर, भ्रमणमा उच्च तहमा यस विषयमा छलफल नै भएन । नेपाली नम्बरप्लेटका बुलेट सञ्चालनका विषयमा उपलब्धिमूलक प्रतिफल आउन सकेन ।
हामीलाई वार्तामा रहेको टोलीले दिएको जानकारीअनुसार भारतले आफ्नो देशको कानुनले नेपाली नम्बरप्लेटका बुलेट सञ्चालन गर्न रोकेको तथा कानुन संशोधन गर्न समय लाग्ने जानकारी दिइयो । तर, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा समस्या समाधान नभएकाले अब नेपालीको अर्बौं लगानी डुब्ने भयो । हाल भारतका विभिन्न सहरमा विशेष सतर्कताका साथ बनाउन दिइएको ७ सय ७५ नेपाली बुलेटको साढे ५ अर्ब जोखिममा परेको छ । प्रतिबुलेट निर्माण गर्न करिब ७० लाख रुपैयाँ लाग्छ ।
नेपाली उद्योगीले सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गर्दा पनि भारतको नागपुरस्थित एक्सप्लोसिभ विभागबाट विस्फोटनसम्बन्धी प्रमाणपत्र र अनुमति नपाउँदा नेपाली उद्योगीको अर्बौं रुपैयाँ फसेको हो । भारतीय एक्सप्लोसिभ विभागले नेपाली नम्बरप्लेटको बुलेटलाई एक्सप्लोसिभ अनुमति र प्रमाणपत्र दिन नसक्दा आठ महिनादेखि ५३ वटा ग्यास रिफिलिङ गर्ने उद्योगको नेपाली नम्बरप्लेटको बुलेट भारतको हरियाणा, राजापुर, बडौंदा, पुणे र दिल्लीमा अलपत्र परेका छन् ।
व्यवसायीले नेपाल आयल निगमबाट ७ सय ७५ वटा बुलेट सञ्चालनसम्बन्धी अनुमति प्राप्त गरेका थिए । हालसम्म ४ सय बुलेट तयार भइसके । साथै, थप ३ सय ७५ को निर्माण पनि अन्तिम चरणमा रहेको छ । पहिला नेपाल आफंैले कच्चा तेल किनेर भारतमा प्रोसेसिड गरी आफ्नै गाडीमा तेल ल्याउँथ्यो । त्यस्तै, सन् १९९४ मा दिएको अनुमतिअनुसार नेपाली बुलेटले त्यतिबेला पनि भारतबाट ग्यास बोकेर ल्याउँथे ।
तर, त्यो नेपाली बुलेट सानो भएकाले व्यावसायिक रूपमा नाफा नहुने भएपछि रोकिएको थियो । भारतीय विस्फोटन विभागले सन् १९९४ मा दुईवटा नेपाली नम्बरप्लेटको बुलेटलाई अनुमति र प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको थियो । तर, यही विभागले अहिले भने अनुमति र प्रमाणपत्र दिन आनाकानी गर्दै आएको छ । विस्फोटनसम्बन्धी प्रमाणपत्र अभावमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) ले उक्त बुलेटमा लोड दिन मानेको छैन ।
हाल हामीले नयाँ बुलेट बनाएर ग्यास ल्याउन लाग्दा कानुनले दिन्नँ भन्ने कुरा गलत हो । पहिलेचाहिँ मिल्थ्यो, अहिले किन मिल्दैन ? शुक्रबार दिउँसो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा नेतृत्वको नेपाली टोलीले भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री निर्मला सीतारमणलाई पनि नेपाली ग्यास उद्योगीले सम्पूर्ण नियम र मापदण्ड पु¥याएर भारतमै निर्मित नेपाली नम्बरप्लेटको बुलेट सञ्चालनमा ल्याउन लागेकोमा किन रोकिएको भनी प्रश्न ग¥यौं । तर, भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्रीले यस विषयमा जानकारी भएको मात्र भनेर टारिन् ।
हाल भारतको सातवटा ढुवानी व्यवसायी (ट्रान्सपोर्टर) का ७ सय बुलेट भाडामा लिएर नेपालका उद्योगीले भारतको चारवटा रिफाइनरी केन्द्र कर्णाल, मथुरा, हल्दिया र बरौनीबाट ग्यास आयात गर्दै आएका छन् । भारतीय व्यवसायीले ढुवानी खर्चबापत नेपालबाट वार्षिक ३ अर्ब भुक्तानी लिँदै आएका छन् । नेपाली नम्बरप्लेटका बुलेट प्रयोगमा आएपछि नेपाल–भारतबीचको व्यापारघाटा करिब ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कम हुने अपेक्षा छ । यस्तै, नेपाली बुलेट चल्न थाले करिब २ हजार ५ सय नेपालीले रोजगारीको अवसर प्राप्त गर्छन् ।
तर, भारतको यो कदम तथा सरकारको लाचारीले नेपालमा तिहारपछि नाकाबन्दीको स्थिति सिर्जना हुन्छ । किनकि नेपाली उद्योगीहरूले नोभेम्बरदेखि भारतीय नम्बरप्लेटको खाना पकाउने ग्यास बुलेट नेपालमा चल्न दिँदैनन् । नोभेम्बरदेखि खाना पकाउने ग्यासमा करिब–करिब संविधान जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी गरेको अवस्था नै सिर्जना हुन्छ ।
सरकार तथा सरकारका सचिव सबैलाई हामीले भ्रमणभन्दा पहिला पनि जानकारी दिइसकेका छौं । तर, अन्तिम समयमा अप्ठ्यारो नपरेसम्म काम नगर्ने नेपाली कर्मचारी तथा नेता अनि भारतको पनि रवैयाले नेपाली नागरिकले फेरि खाना पकाउने ग्यासको नाकाबन्दी बेहोर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ ।
भारत भ्रमण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आर.बी. रौनियार